प्रचण्डलाई एमालेको कडा चुनौती : राष्ट्रपतिलाई छोए उपराष्ट्रपति र सभामुख बाँकी नरहने - Onlinenews Global
July 29, 2021 laxmiLeaveaComment on प्रचण्डलाई एमालेको कडा चुनौती : राष्ट्रपतिलाई छोए उपराष्ट्रपति र सभामुख बाँकी नरहने
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले महाभियोगबारे चर्चा गरिरहेका बेला एमालेले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाए उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म कोही बाँकी नरहने चेतावनी दिएको हो । उपरराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा दुबै माओवादीबाट हुन् ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउने हल्ला पनि चलेको उल्लेख गर्दै यस्तो सपना नदेख्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने हल्ला यो त प्रोपोगाण्डामात्रै हो । यो सम्भव छैन् । महाभियोग लगाउन त्यति सजिलो छैन् । त्यति सजिलो भएको भए महाभियोग पहिल्यै आउँथ्यो ।’
उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलका नेताहरुलाई राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाएर मात्रै हेर्न चुनौती दिए । उनले भने, ‘महाभियोग लगाएर मात्रै हेर्नुहोस, त्यसपछिको स्थिति के हुन्छ ? हुन त उहाँहरुसँग संख्या पनि पुग्दैन् । महाभियोग लगाएरमात्रै के गर्नु ? त्यो पारित हुन संख्यापनि पुग्नुपर्यो नि । पास हुँदैन् ।’ तर, सभामुखमाथि महाभियोग लगाईए अवस्था के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘धेरै साथीभाईहरुमाथि पनि महाभियोग लाग्न सक्छ ? छोएर त हेर, लगाएर त हेर ? म चुनौती दिन चाहन्छु ।’
उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले साँढे तीन वर्षको अवधिमा धेरै राम्रो काम गरेको दाबी गरे । उनले ८०/९० प्रतिशत राम्रो काम गरेको दाबी गरे । तर, काम गर्दै जाँदा दुई÷चार वटा गल्ती भएको होला भन्ने उनको भनाई थियो । उनले ओली सरकारले नै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेकोले वर्तमान सरकारले यसमा उचित तवरले वितरण गरोस र सबै जनताले भ्याक्सिन लगाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि धारणा राखे । तर, भ्याक्सिनमा पोलिटिक्स गरिए राम्रो नहुने उनको भनाई छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
दमककी छात्रा सेजल कोइरालाको प्रेमीले नै ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या गरेको परिवारको दा’बी
होलसेलमै प्रतिक्यारेट ४२० रुपैयाँ पुग्यो अण्डाको मूल्य